Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » 2022 Obodo kacha emesapụ aka na USA
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Otu egwuregwu bọọlụ abụghị naanị ihe dị nsọ na Obodo ejima. Minneapolis na St. Paul, Minnesota, kwadoro n'ezie ihe “agbata obi” pụtara.
Ka anyị na-abanye n'oge inye onyinye - inye ekele na inyere ndị nọ na mkpa aka - ọtụtụ n'ime anyị na-arụ ọrụ ma na-enwetakwu ego, mana ọrịa na-efe efe na-aga n'ihu na-eme ka ndụ sie ike nye nde ndị America.
N’ezie, “ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde ndị okenye 20 bi n’ezinụlọ ndị na-erichaghị eriju afọ” na “ndị okenye ndị na-agbazinye ego nde 12 nọ n’azụ ụlọ,” dị ka Center on Budget and Policy Priorities si kwuo.
Obi dị m ụtọ na ọtụtụ ndị America na-agbali elu iji nyere ndị nọ ná mkpa aka.
Mana kedu obodo kacha emesapụ aka nke 2022?
Ndị nyocha tụlere 130 n'ime nnukwu obodo US gafee ihe ngosi 13 dị mkpa nke omume enyemaka, site na inye onyinye afọ ofufo na ọnụego afọ ofufo ruo ọnụ ọgụgụ ụlọ akụ nri - ọbụlagodi ọnụọgụ ndị tụgharịrị ha. Ọbá akwụkwọ nta efu n'ime igbe nkesa nri maka ndị agbata obi agụụ.
Hụ obodo iri abụọ ahụ ka ha na-eru n'ime obi ha na akpa ha n'okpuru.
Obodo kacha emesapụ aka nke 2022
7 Paul Nwokocha, MN
15 Cincinnati, Oz
Isi ihe na:
Ejima Kachasị Mma: Otu egwuregwu bọọlụ abụghị naanị ihe dị nsọ na Twin Cities. Minneapolis na St. Paul, Minnesota, kwadoro n'ezie ihe “agbata obi” pụtara. Minneapolis rutere n'ọkwa mbụ ma n'ozuzu yana na ngalaba mmesapụ aka nke onye, ​​ebe St. Paul gwụchara n'oge adịghị anya n'ọkwa nke asaa.
Ọ bụghị nanị na ndị bi n'obodo ndị a bụ ndị kasị enye oge ha (ma nke 1 maka ọnụego afọ ofufo), ma ha na-ahụkwa na-ejere ndị obodo agụụ na-agụ nri na-ekpo ọkụ. Minneapolis họọrọ No. 6 na St. Paul No. 8 na kichin ofe. Ha nyekwara nọmba 3 na nke 13, n'otu n'otu, n'ịkesa igbe igbe nke ndị obodo haziri maka ndị agbata obi ha enweghị nri n'oge ọrịa ahụ.
Mister Rogers gaara enwe ọmarịcha ụbọchị na mpaghara ndị a.
Obodo buru ibu, mkpa buru ibu:
Nnukwu obodo n'ozuzu na-eme nke ọma na ọkwa karịa obodo nta na nke etiti.
Nke ahụ bụ n'ihi na nnukwu obodo na-elekwasị anya n'ịkwalite mmetụta mkpokọta ha karịa onyinye ha n'otu n'otu. N'ezie, obodo atọ kasị ukwuu nke America, New York, Chicago, na Los Angeles n'usoro ahụ, na-achịkwa metrik mmesapụ aka Community anyị. Houston, San Francisco, na Washington, DC, nyekwara n'isi iri nke otu a.
Site na enweghị ahaghị nhata nke akụ na ụba na-abawanye, obodo ukwu ndị a na-egosi na mmesapụ aka na-etolite n'ebe ọ kacha mkpa.
Florida Falls n'akụkụ ụzọ:
Florida zigara obodo anọ na ala 10 anyị, gụnyere Hialeah na ebe ikpeazụ n'ozuzu ya. Jacksonville (No. 45) na Orlando (No. 58) bụ nanị obodo abụọ Sunshine State gbawara n'elu ọkara.
N'ime otu mmesapụ aka nke onye ọ bụla, ọtụtụ obodo Florida kekọtara maka ebe ikpeazụ n'ime anọ n'ime metrik isii na ọ gbanarị naanị ebe ikpeazụ na abụọ ndị ọzọ. Nrụ ọrụ ha na mmesapụ aka Obodo adịghịkwa mma. Ọnụọgụ ebe nchekwa anụmanụ bụ naanị metric n'ime mkpokọta asaa nke obodo Florida enweghị ọkwa na 10 nke ala ma ọ bụ tie maka ebe ikpeazụ.
Ọ bụrụ na ị daa n'oge ihe siri ike, agala n'ọtụtụ obodo Sunshine State na-achọ enyemaka - mana jide n'aka na ndị enyi gị nwere ụkwụ anọ ga-achọta ụlọ.